Fitsarana ny Bakalôrea Hovitaina ao anatin’ny 10 andro
Am-periny amin’ny fitsarana taratasim-panadinana bakalôrea ny mpampianatra nantsoina hisahana izany.
Bakalorea 2020 Somary ratsy ny naoty tamin’ny taranja fizika
Efa ao anatin’ny fitsarana ny taratasim-panadinana Bakalorea tanteraka ireo mpampianatra mandray an-tanana izany ankehitriny. Raha araka ny fanadihadiana natao dia ny taranja Malagasy no tsy nahitana olana firy.
Oniversiten’i Farafangana Hiverina hisokatra indray telo taona aty aoriana
Hisokatra indray ny oniversiten’ny Faritra Atsimo Atsinanana ao Farafangana rehefa nikatona nandritra ny telo taona.
Ny Fikambanana Tanora Garan'teen Alaotra Mangoro dia nikarakara hetsika ho fanamarihana izany fankalazana izany izay niarahana niasa tamin'ny Sampandraharaha miadidy ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny Maison des Jeunes Moramanga ary ireo fikambanana tanora samihafa (Fanilon'i Madagasikara, YMCA, Association Mitsinjo ny Ankizy, CFPCE Louisannie). Hetsika samihafa no nanamarihana izany toy ny fanadiovana sy fambolena voninkazo ary fanavaozana ny vavahadin'ny Maison des Jeunes Moramanga sy ny CSBII Amis des Jeunes Ambohimandroso. Teo ihany koa ny fanentanana ireo zatovovavy voafonja sy ireo zatovovavy sahirana izay niresahana ny lohahevitra mahakasika ny fitantanana ara-batana sy ara-tsaina mandritry ny fadim-bolana eo amin'ny zatovovavy. Nisy ny fizarana fitaovam-pidiovana ho an'ireo zatovovavy ireo nandritry izao fankalazana izao. Ny fikambanana Tanora Garan'teen Moramanga dia fikambanana misehatra amin'ny tanora ary manampy ireo tanora hanana fitondrantena mendrika ary misehatra amin'ny fahasalamana ara-pananahana ihany koa ny fikambanana.